Greater Minnesota Housing Fund - McKnight Foundation
Sanduuqa Gurisiinta ee Weyn
Nooca: Maalgashiyada Suuqa Hoostooda, Maalgashiga Saameynta Saamaynta Leh
Mawduuca: Dhismayaasha & Guriyeynta
Sanduuqa Guriyeynta Waddaniga ah ee Greater MN wuxuu bixiyay deynta dhismaha ee Park Place Apartments, oo ah horumarinta guriyeynta taageerada ee Bemidji, Minn. Furitaanka Oktoobar 2017, waxaa ka mid ah 60 cutub oo horay loogu soo koobi jiray dadka waaweyn ee guri la'aanta ah waxayna u adeegtaa shaqsiyaadka si adag u shaqeynaya si ay uga gudbaan arrimaha la xariira mukhadaraadka.
$ 5 milyan oo amaah 10 sano ah 2%; laga soo bilaabo 2009
Sare u qaadista si loo yareeyo khalkhalka khasaarada ee Minnesota oo sii kordheysa iyo meelaha kale ee mudnaanta sare leh ee guryaha la awoodi karo. Guryaha la awoodi karo waa dhismaha dhismaha dhaqaale ee gobolka oo dhan.
Soo Celinta Dhaqaale: Deyntu waxay ku socotaa guusha. Waxay bixisay maamulaheedii ugu horeeyay sannadka 2016.
Saameynta Bulshada: Bilaabidda 2009, Sanduuqa Gurisiinta ee Weyn iibsadeen oo dib loo furay 230 guri oo loo qoondeeyay. Guryaha waa la hagaajiyay oo dib loo iibiyey sidii guryaha cusub oo la awoodi karo oo loogu talagalay qoysaska dakhligoodu dhexdhexaadka yahay, iyagoo gacan ka geysanaya xasilinta bulshooyinka adag ee ka baxsan metro. Ururku wuxuu kaloo isticmaalay caasimadda McKnight si uu u koro; hadda waxay maamushaa $ 55 malyan oo deyn ah oo loogu talagalay guryaha mashruuca.
Unugyo badan oo badan ayaa la ilaaliyaa ama la dhisaa iyada oo loo marayo amaah lagu soo celinayo 438
Unugyada qoyska oo keliya ayaa la ilaaliyaa ama la dhisaa iyada oo loo marayo amaah amaah ah 55
Deynta qoysaska badan iyo hal mar $ 15.5m
Casharadii la baray
Marka la eego baahida kireysiga kirada oo jaban waxay ka badan tahay bixinta guryaha kirada-la kabo, Sanduuqa Guriyeynta Waddaniga ee Greater Minnesota waa maalgelin, dayactir, iyo ilaalinta "dabiici ah"(Tusaale ahaan, aan la kabo) guryaha la awoodi karo. Shaqadani dhaqaale ahaan waxay caqabad ku tahay ballanqaad iyo balanqaad weyn oo loogu talagalay shaqaalaha aasaasiga ah iyo u doodayaasha guryaha.
Sawir Sawir ah: Sanduuqa Gurisiinta ee Weyn
Dib-u-Eegid Qirasho: Maktabadda McKnight ma ogolaato ama ha kugula taliso wax kasta oo ganacsi, nidaam, ama bixiyeyaasha adeegga.
Last updated 11/2017
Eeg dhammaan Maalgelinta Saamaynta
Cinwaanka emailka	 Magaca hore	 Magaca Dambe	 Ka dooro - McKnight Foundation News - Doortay - Maya	 Xiiso la doortay ma jirto